Bật mí 40 cuốn sách nên đọc trong đời | Anybook.vn - Anybook
Bật mí 40 cuốn sách nên đọc trong đời | Anybook.vn
Tia mamaky boky ve ianao? Ny boky dia harenan’ny fahalalana, fitaovana hanampiana anao hanatsara ny tenanao sy hiaina fiainana mahafinaritra kokoa. Koa maninona raha mijery boky, amin’io mpifankatia io isika mba hahatonga ny fiainantsika ho sarobidy kokoa. Eto dia Boky 40 hovakiana eo amin’ny fiainana. Manantena ny hanampy anao hahita zavatra mahaliana sy lesona lalina avy amin’izany.
1 Mandresy fo
2 7 fahazarana ny tanora mahomby
3 Sahia misaina be
4 Aza misakafo irery mihitsy
5 Mihinàna hendry dia lazao fa ho azonao izao tontolo izao
6 Ny zavakanton’ny fifampiresahana ho amin’ny fahombiazana
7 Tontolo fisaka
8 Fahendrena jiosy
9 Dia mankany Atsinanana
10 manan-talenta aho, ianao koa
11 Ohatrinona ny lanjan’ny tanora?
12 Raha nahafantatra ahy ianao tamin’izaho 20 taona
14 Isaky ny fahalavoana dia fitomboana
15 Ampianaro hanan-karena ny ankizy
16 Omeo tapakila ho amin’ny fahazazana aho
18 Mpivarotra lehibe indrindra eran-tany
19 Ilay Lehilahy antitra sy ny ranomasina
20 Mpivarotra kiraro miliara
22 Aza miraharaha izao tontolo izao – Miaina toy ny Japoney
23 Fo andriana
24 Lany avokoa ny rehetra ka tsy misy hanenenana
25 Mifohaza ilay olona miavaka ao anatinao
26 Ilay sahy manome
27 13 fitsipiky ny fisainana manankarena, ny fananan-karena
28 Drafitra fiainana
29 Ny fetranao ihany no fiaingana
30 Ny fiainanao, tsy velona ho an’iza na iza
31 Rehefa tsy maharaka ny nofinofy ny talenta
32 Miadana ao anatin’ny tontolo haingana
33 Mila miaina tsara fotsiny ianao, ary handamina azy ho azy ny lanitra
34 999 taratasy ho ahy
35 Ho maitso mandrakizay ny fahatanoranay
36 Ny faharetana amin’izao fotoana izao, ny ho avy mafy orina
37 Eo amin’ny faha-20 taonantsika rahateo izany
38 Misambotra ankizy eny an-tsaha maitso
39 Mahita voninkazo mavo amin’ny ahitra maitso aho
40 Tanora hazo akondro manao kiraro maitso
Ity dia boky nosoratan’ny taranaka maro izay naniry hatrany ny hanatsara ny tenany mba hahatratra ny fiainana tsaratsara kokoa. Iray amin’ireo boky tsy ho adino ao amin’ny Top Boky 40 hovakiana eo amin’ny fiainana.
7 fahazarana ny tanora mahomby
Samy manana ny fahazarana ny tsirairay, hisy ny fahazarana tsara sy ratsy. Ny fahazarana ratsy dia hanemotra ny asanao ary ny mifamadika amin’izany ny fahazarana tsara dia hanampy anao hahomby kokoa amin’ny fiainana.
Sahia misaina be
Ny boky 40 tokony hovakianao eo amin’ny fiainanao dia fitaovana sarobidy izay hitondra anao amin’ny fahombiazana
Ny boky dia tari-dalana hanampy anao hahatratra ny nofinofinao. Mitarika anao amin’ny fahombiazana amin’ny herinao sy ny finoanao. Mandritra izany fotoana izany, manampy anao hieritreritra, hahatsapa ny nofinao amin’ny fomba famoronana indrindra, mamaritra mazava tsara ny tanjona stratejika amin’ny dingana tsirairay amin’ny fiainana.
Aza misakafo irery mihitsy
Ny mpanoratra dia nizara ny traikefany momba ny fomba fanatonana ny hafa sy ny fananganana fifandraisana midadasika mifototra amin’ny saina. Avy eo dia mampiseho fa tena ilaina ny fananganana fifandraisana amin’izao androntsika izao.
Mihinàna hendry dia lazao fa ho azonao izao tontolo izao
Tena ilaina eo amin’ny fiainantsika ny fahaizana mifandray. Ny boky dia manome antsika lesona momba ny fahaizana miteny amin’ny toe-javatra samihafa mba hahatonga ny olona ho mangoraka.
Ny zavakanton’ny fifampiresahana ho amin’ny fahombiazana
Ny boky dia natao ho an’ny mpamaky rehetra, na mpianatra, na mpivarotra, na mpandraharaha, na mpitantana, na mpanao politika na vehivavy mpikarakara tokantrano na izay te hifehy ny fifandraisany, ny fidiram-bolany na ny fiainany, amin’ny fomba mahomby indrindra.
Ny firesahana momba ny fironan’ny fanatontoloana, ny fidirana ary ny fianarana fahalalana amin’izao fotoana izao dia hanampy antsika hahazo vaovao mahasoa kokoa handraisana ny fandraisana andraikitra amin’ny dingan’ny fampidirana.
Ny boky dia manatsara ny fandalinan-tena jiosy, ny fitadidiana ary ny famakafakana. Avy eo dia hita fa mba hahazoana fahombiazana dia ilaina ny manofana fisainana mamorona, fahaizana mianatra ary finiavana maharitra.
Dia mankany Atsinanana
Ny Journey to the East dia boky manana fisainana filozofika be dia be. Miresaha momba ny fahafatesana, ny olona ary ny dikan’ny fiainana. Mitondra fomba fijery maro amin’ny lafiny maro momba ny fiainana tsara fanahy, harena ary fahasambarana ny olona. Mahatakatra lalindalina kokoa ny momba ny tontolo ara-panahy ankoatry ny fisiana izay ifandraisantsika isan’andro.
manan-talenta aho, ianao koa
Ny boky dia mirakitra ny tsiambaratelo hanampiana ny mpanoratra hahatratra zava-bita maro eo amin’ny fianarana sy ny fiainana. Avy amin’ny mpianatra ratsy indrindra ao Singapour dia niakatra ho lasa mpandahateny manan-talenta, mpandraharaha mahomby ary mpanapitrisa mahomby.
Manana talenta aho, ianao koa – Ny boky mafana indrindra amin’ny fotoana rehetra
Ohatrinona ny lanjan’ny tanora?
Ataovy amin’ny fomba feno ny fiainanao ary tokony hiaina ny fahatanoranao no andro tsy hay hadinoina indrindra eo amin’ny fiainanao. Izany no hafatra tian’ilay boky halefa amin’ny mpamaky. Ity dia iray amin’ireo Boky 40 hovakiana eo amin’ny fiainana, indrindra raha mbola tanora ianao.
Raha nahafantatra ahy ianao tamin’izaho 20 taona
Ity dia boky tokony hovakiana amin’ny faha-20 taonany amin’ny fiteny tsotra izay mora azo nefa mampita hafatra lalina. Nizara traikefa lalina momba ny lesona eo amin’ny fiainana ny mpanoratra.
Ny boky dia heverina ho tondrozotra ho an’ireo izay tsy nahita ny lalany, indrindra fa ny tanora, fa ny nofinofin’ny olona no anjarany, ary ny mahafoy ny nofinofy dia ny mahafoy ny anjara.
Isaky ny fahalavoana dia fitomboana
Nantsoina hoe torohevitra tsotra nefa misy dikany ho an’ny fiainana. “Isaky ny lavo ianao dia mihalehibe. dia niteraka famporisihana lehibe ho an’ny taranaka tanora mba ho sahy hanandrana sy hanaraka ny nofinofiny.
Ampianaro hanan-karena ny ankizy
Tsy boky mampiasa vola ho fandrefesana fotsiny, fa mba hanome anao fanazavana fototra hahafantarana hoe aiza no hampifantohana ny herinao hanan-karena, sady mamporisika anao hatanjaka hatrany. ara-panahy sy matanjaka.
Iray amin’ireo sanganasan’i Nguyen Nhat Anh malaza ity. Mamerina ny fitadidiana tsirairay ny boky, maka ny fahatsiarovana ny fahazazana taloha. Nanomboka teo dia tsapako fa nanana fotoana toy izany koa aho, fotoana hahatsiarovana ny fiainan’ny olona tsirairay.
Harry Potter dia nanosika ny fisainan’ny ankizy eran’izao tontolo izao mba hiakatra ambony kokoa amin’ny tontolon’ny majika. Boky fito indray no mitondra ny mpamaky hahita avy amin’ny ankizilahy 10 taona mankany amin’ny mpanao ody sarotra Harry sy ny namany roa ao amin’ny Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
Mpivarotra lehibe indrindra eran-tany
Ny fampindramam-bola ny asa varotra mba hiresaka momba ny maha zava-dehibe ny saina eo amin’ny raharaham-barotra dia tena ilaina. Ankoatr’izay, ny maha-mpivarotra tsara dia mitaky finiavana sy hafanam-po amin’ny asa.
Ilay Lehilahy antitra sy ny ranomasina
Amin’ny maha-asa idealy azy dia tena misy dikany tokoa izany ho an’ireo izay te hilavo lefona, izay te hilefitra amin’ny tenany. Tsy ho fantatrao izay hitranga any aoriana, koa minoa ny lalana nofidinao, minoa ny fahaizanao.
Mpivarotra kiraro miliara
Ny asa dia namorona marika ny kolontsaina orinasa. Izany no fanalahidin’ny fikatsahana tontolo iainana mavitrika sy serivisy miavaka.
Miaraka amin’ny votoaty izay manohana ny andraikitry ny lehilahy ao amin’ny fianakaviana ary manamafy fa tsy misy fitiavana ambony noho ny fitiavana an’ny fianakaviana, ny Godfather dia boky tsara foana eo amin’ny tampony. Boky 40 hovakiana eo amin’ny fiainana ary mpivarotra tsara indrindra amin’ny fotoana rehetra.
Aza miraharaha izao tontolo izao – Miaina toy ny Japoney
Ataovy milamina ny fiainanao ary tsy miraharaha an’izao tontolo izao, na inona na inona fanehoan-kevitry ny hafa. Miaina amin’ny andro iray izay ahafahanao miala amin’ny tenanao, miala amin’ny zavatra sarotra, mikorontana ary mampanahy. Ankafizo ny ambaratonga tsirairay amin’ny fihetseham-ponao manokana.
Ahitana votoaty tsotra izay fiainana mahazatra an’ny zazalahy iray tena manohina ny fo miaraka amin’ny fahatsapana tsy manan-tsiny amin’ny mpampianatra azy ao amin’ny kilasy voalohany. Nosoratana io boky io mba handefasana hafatra ho an’ny rehetra hoe mitia izay rehetra manodidina anao, mankasitraka sy mampamirapiratra ny fonao amin’ny fo mihaja.
Lany avokoa ny rehetra ka tsy misy hanenenana
Toy ny boky torolalana feno fahalalana sy fahaiza-manao ilaina ho an’ny tanora alohan’ny hidirana eo amin’ny tokonam-baravaran’ny fiainana. Manampy anao hahita ny tenanao amim-pahatokiana izany, mankany amin’ny fahombiazana ho avy.
Mifohaza ilay olona miavaka ao anatinao
Ny mpanoratra dia nanome fitsipika sasantsasany amin’ny fiainana toy ny: ny fitsipiky ny fanaintainana sy ny fahafinaretana na ny fitsipiky ny fandresena ny fanaintainana amin’ny fisalasalana ara-tsaina. Misy fanaintainana sy alahelo koa ny fiainana. Raha tokony hamela ireo zavatra ireo hifehy anao, ny mpanoratra dia manolotra fomba hanampiana anao hamadika ny fanaintainana ho antony manosika.
Ilay sahy manome
Ny fanomezana alohan’ny fandraisana dia hafatra manan-danja tokony hatao raha te hampandroso ny tenanao ianao. Amin’ny alàlan’ity boky ity dia manandratra ny tenanao amin’ny haavo vaovao miaraka amin’ny fisainana vaovao ianao.
13 fitsipiky ny fisainana manankarena, ny fananan-karena
Nametraka fitsipika 13 i Napoleon Hill mba hanampiana ireo izay te hihevitra ny hanankarena, hanan-karena dia hahita ity dingana ity ho tsotra kokoa.
Ny boky dia manome vahaolana hanampy amin’ny famaliana ny fanontaniana momba ny fomba hiatrehanao toe-javatra mitranga eo amin’ny fiainanao. Ny boky dia lesona momba ny toe-tsaina sy ny fomba tsara indrindra hiatrehana izany.
Ny fetranao ihany no fiaingana
Dia boky momba ny fahaiza-miaina izay tokony hovakian’ny tanora rehetra indray mandeha. Tsy mitondra angovo tsara fotsiny fa lesona momba ny fitomboana ihany koa.
“Tsy maninona na aiza na aiza no hanombohanao, ny zava-dehibe dia ny halaviranao rehefa miala amin’ny tsipika fiaingana. “
Ny fiainanao, tsy velona ho an’iza na iza
Boky tokony hovakian’ny tanora izy ity noho ireo hafatra manan-danja nentina avy tao amin’ilay boky. Misy toko 4 misy pejy 200 ny halavany. Ny atiny dia namboarina ara-tsiansa ary nosoratana tamin’ny fomba mora azo.
Rehefa tsy maharaka ny nofinofy ny talenta
Miaraka amin’ireo fahatafintohinana maharary avy amin’ny fiainana dia lesona iray hanampy anao ho matotra kokoa. Rehefa tsy maharaka ny nofinofy fototra ny talenta dia misy misafidy ny hilavo lefona, ny hafa kosa miatrika fahasahiranana sy fanamby hanatrarana ny nofinofy. Rehefa tsy maharaka ny nofinofy ny talenta toroy hevitra izahay mba hanana ny fiainanay amin’ny fomba feno, tsy ho very maina ny fahatanoranay.
Miadana ao anatin’ny tontolo haingana
Lesona momba ny hasarobidin’ny fiainana ilay boky. Aza apetraka amin’ny tenanao ny asa ary mirotsaha amin’ny fandehan’ny olona fa tsy maintsy mianatra mankasitraka ny tenantsika isika tsirairay avy.
Mila miaina tsara fotsiny ianao, ary handamina azy ho azy ny lanitra
Rehefa mijoro eo amin’ny tampon’ny fahombiazana na eo amin’ny faran’ny tsy fahombiazana ianao dia tadidio fa tsy mora ho an’iza na iza ity fiainana ity. Na fahombiazana izany, na tsy fahombiazana, na traikefa ratsy indrindra, dia lesona eo amin’ny fiainana ny miala amin’ny tenanao. Izany no hafatra tian’ilay boky holazaina.
999 taratasy ho ahy
Ny hafatra alefan’ny mpanoratra amin’ny mpamaky dia ny hahatongavana ho kinova tonga lafatra indrindra amin’ny tenanao. Miezaha handamina ny tenanao anio.
Ho maitso mandrakizay ny fahatanoranay
Ny boky dia miresaka momba ny taonan’ny fahatanorana, izany no tokony hataonao amin’ny fahatanoranao, ny fijaliana na ny fahalavoana dia olana tsy maintsy lalovan’ny tsirairay vao mihalehibe.
Ny faharetana amin’izao fotoana izao, ny ho avy mafy orina
Ny Perseverance Present in the Future dia boky manentana ny tanora hitia amim-pahasahiana sy hiaina amim-pahasahiana. Miaraka amin’ny tena traikefan’ny mpanoratra dia hitondra angovo vaovao ho anao izany.
Eo amin’ny faha-20 taonantsika rahateo izany
Ity dia boky mamintina ny trivia eny amin’ny oniversite izay sendra antsika rehetra. Nanomboka teo dia lasa haingana dia haingana ny faha-20 taona ary toy izany koa ny fiainan’ny olombelona, ​​koa ataovy amin’ny fomba feno ny fiainanao amin’ny fahatanoranao.
Misambotra ankizy eny an-tsaha maitso
Ny hafatra dia mahita ny fiainana amin’ny fomba mahatsikaiky sy marina kokoa. Ny votoaty dia ny fitabataban’i Holden mandritra ny ora maro, saingy tsy mankaleo fa ny mifanohitra amin’izany dia tena mampihomehy sy mahasarika.
Mahita voninkazo mavo amin’ny ahitra maitso aho
Namboarina ho sarimihetsika mitovy anarana nosoratan’i Nguyen Nhat Anh ny tantara. Miaraka amin’ny fitantarana tsotra nefa tena akaiky, dia nahasarika ny fon’ny mpijery ilay asa satria namerina namerina ny fahazazana tsy misy ahiahy tamin’ny vanim-potoana taloha.
Ny hazo akondro tanora manao kiraro maitso dia mamerina ny tantara malefaka, ny fomba hanehoana ny fihetseham-pon’ny ankizy tsy manan-tsiny nefa mahafatifaty.
Hafatra manan-danja sy lalina ho an’ny mpamaky ny boky tsirairay. Noho izany, miankina amin’ny taonanao sy ny zavatra mahaliana anao, mifidiana boky tsara hodinihina. Ny ambony dia Boky 40 hovakiana eo amin’ny fiainana mikendry ny hanampy ny mpamaky hijery sy hahita ny asa tsara indrindra hanompoana ny lalana handresena nofy, tonga lafatra ny tenanao ho amin’ny dikan-teny tsara indrindra. Misaotra anao namaky ny lahatsoratra, araho ny pejy hanavaozana ny lahatsoratra farany momba ny boky hovakiana amin’ny faha-16 taonany, ny boky hovakiana mba hahombiazana, sns.
READ 25 cuốn sách huyền học hay, sống động và đầy mê hoặc | Anybook.vn
Previous: Top 100+ Hình Nền Điện Thoại Thiên Nhiên Đẹp Ngỡ Ngàng | Anybook.vn
Next: Công việc của thủ kho là gì và những kỹ năng “đinh” trong nghề | Anybook.vn